Potentiae - ラテン語 - コーサ語 翻訳と例
検索ワード: potentiae (ラテン語 - コーサ語)
respondensque rex Asuerus ait quis est iste et cuius potentiae ut haec audeat facer
nento obuyiyo ubukhulu obuncamisileyo bamandla akhe abhekisele kuthi, thina bakholwayo, angokokusebenza kokuqinisela kokomelela kwakhe,
akubon ukuba ubonisa abantu ubutyebi obuzukileyo bobukumkani bakhe, nesihombo esinqabileyo sobukhulu bakhe imihla emininzi, imihla elikhulu elinamanci asibhozo.
responderunt de terra longinqua valde venerunt servi tui in nomine Domini Dei tui audivimus enim famam potentiae eius cuncta quae fecit in Aegypt
Bathi kuye, Bavela kwelikude kakhulu ilizwe abakhonzi bakho, ngenxa yegama likaYehova uThixo wakho; kuba siluvile udumo lwakhe, nento yonke awayenzayo eYiputa;
et in Tafnis nigrescet dies cum contrivero ibi sceptra Aegypti et defecerit in ea superbia potentiae eius ipsam nubes operiet filiae autem eius in captivitatem ducentu
ETapanesi iya kuba mnyama imini, ekuzaphuleni kwam khona iidyokhwe zaseYiputa, liphele kuyo iqhayiya lamandla ayo. Amafu aya kuyisibekela, namagxamesi ayo athinjwe;
line of business system (英語>フランス語)ill come with you (英語>タガログ語)pakketten (オランダ語>ベンガル語)whi (英語>オランダ語)zorganizowanym (ポーランド語>ロシア語)travel well (英語>ウェールズ語)verstopften (ドイツ語>英語)reale (イタリア語>フィンランド語)climate change (英語>ハンガリー語)concedente ipoteca (イタリア語>英語)et ee (ポルトガル語>イタリア語)oblikovna (スロベニア語>イタリア語)tröpfchenweise (ドイツ語>オランダ語)pecan nuts (英語>タミル語)muh me ghee shakkar (ヒンズー語>英語)¿cómo está usted (スペイン語>ヒンズー語)vzduchotěsně (チェコ語>スロバキア語)except (英語>パキスタン語)unirse al dolor (スペイン語>チェコ語)su thayu che (グジャラート語>英語)anata ni aitai desu (日本語>英語)da (ウェールズ語>スペイン語)argwanend (オランダ語>英語)upholds virtues (英語>タガログ語)jaljayo naesarang (韓国語>英語)